Maamulka Jubbaland oo sheegay in gacanta lag dhigay Askarigii Xaaskiisa ku dilay Magaalada Kismaayo – Kismaayo24 News Agency
Maamulka Jubbaland oo sheegay in gacanta lag dhigay Askarigii Xaaskiisa ku dilay Magaalada Kismaayo
by admin 16th April 2018 045
Maamulka Axmad madoobe ayaa shaaciyay in gacanta lagu haayo gacan ku dhiiglihii sida arxan darrada aheyd xaaskiisa ugu dilay magaalada kismaayo ee xarunta maamulka jubbaland.
Gacan ku dhiigle Cabdullaahi Asad oo ahaa askari ka tirsan ciidamada daraawiishta maamulka axmad madoobe ayaa waxa uu si bareer ah u dilay xaaskiisa oo lagu magacaabi jiray Marxuumad Muxubo Maxamed Guure.
Jubbaland waxa ay sheegtay in askariga falka dilka ah u geestay gabadhii u dhixi jirtay ee xaaskiisa aheyd in sida ugu dhaqsiyaha badan maxkamad loo soo taagi doono lana waafajin doono shareecada islaamka waxa ay ka qabto .
Askarta maamulka jubbaland ee axmad madoobe hogaamiyo waxaa lagu eedeeyaa in gabood falo ay ka geestaan magaallada kismaayo iyadoona aaney jirin cid ka hadli karta gabood fallada beni’aadannimad ka baxsan ee askarta maamulka axmad madoobe ka geestaan kismaayo iyo deegaannada kale ee jubbaland.
Madaxweyne Farmaajo oo dalka dib ugu soo laabtay kaddib ka qayb-galkii Shirkii Jaamacadda Carabta ee Sacuudiga ka dhacay+Sawirro
Akhriso: Dowladda Soomalia oo War ka soo saartay Xiriirka kala dhaxeeya Imaaraat-ka iyo wararka sheegaya in….
Madaxweyne Zuma oo Ugu dambeyn Xilka iska casilay Kadib markii uu sheegay in….
Akhriso: Safaarada Imaaraadka carabta ee muqdisho oo ku kacday faeexad aan laga aamusi karin kadib markii ay….
Tifaftiraha K24 30th May 2017
Xog Buuxda oo laga helay Kulankii Golaha Shacabka ee Maanta Jawaari Khudbada ka jeedin lahaa oo Baaqday
gurey 11th April 2018